UApple ucinga ukuba iApple TV inohambo olude kwihlabathi loshishino | Ndisuka mac
I-Apple iphinde yaqhuba ukusetyenziswa kweekhompyuter zayo kwilizwe leshishini, kwinqanaba elikhulu. Kuyinyani ukuba iingcali ezinkulu zenza imisebenzi yazo yemihla ngemihla ngeMac kwaye zixhomekeke kwezinye izixhobo zeApple, ezinje nge-iPad okanye i-iPhone. Kodwa I-Apple ifuna ukufumana izinto eziluncedo kwezinye iikhompyuter ezingazange ziyilelwe imeko yezoshishinol. Enye yezi khompyutha yiApple TV. Zombini iingcali, ezinje ngeApple, ziyaqonda ukuba zinohambo olude, ubuncinci kula macandelo alandelayo: kumzi mveliso, kwiihotele nakwizibhedlele. Makhe sibone ukuba zeziphi izinto abanokuzisebenzisa:
1 I-Apple TV kolu shishino:
2 I-Apple TV kwiihotele:
3 I-Apple TV kwizibhedlele:
I-Apple TV kolu shishino:
INkomfa yoMsebenzisi weSizwe iJamf ibisandula ukubanjwa, ibizinyaswe nguMartin Lang, uSekela Mongameli woShukumiso lweShishini kwiSAP. Yena ngokwakhe wazisa:
Sicinga ukuba iApple TV izakusebenza, sisixhobo esihle seshishini. Ukuseta kulula kakhulu. Ndonwabile nyhani.
Umzi mveliso unokusebenzisa ithuba kwitekhnoloji ye-Apple TV, njengokuhambisa umxholo kwizixhobo zeApple. Kodwa ukongeza, ukusetyenziswa ngokulula kunye nokulula kofakelo kuyaxabiswa. Kwelinye icala, nangaphezulu ngokufika kwetvOS Ukungeniswa kwi-Apple TV 4, sinezicelo zesiko esivumela ukuba sithumele imiyalezo kunye nolwazi olwahlukeneyo kubasebenzi. Kodwa ukubaluleka kwe-tvOS akupheleli apho. Abaphuhlisi banokwenza izicelo ezithile zenkampani, ngenxa yenkqubo yokusebenza.
I-Apple TV kwiihotele:
Ngesi sihlandlo, i Umxholo kwimfuno ibonelelwe yinkqubo ye-Apple ecosystem, isetyenziswa 100% ziindwendwe zehotele. Umculo wethu weApple, iNetflix, iTunes ubhaliso luya kusebenza nge-100%, ngokungathi besisekhaya. Kodwa kwakhona, ukuba umxholo onawo kwi ICloud okanye kwi-Mac yakho, ungayihambisa kwi-Apple TV yakho, Ngaphandle kokwenza iindibano ezinkulu zeentambo, iiadaptha, njl.
I-Apple TV kwizibhedlele:
Inyathelo lokuqala lathathwa liZiko Lonyango laseJacobs kwiYunivesithi yaseCalifornia. Ukusukela ngoko, amagumbi ayo angama-245 ane-iPad kunye ne-Apple TV ukwenza ukuhlala kwakho kumnandi. Kodwa ukongeza ekusebenzeni njengolonwabo, ivumela abaguli ukuba babe nokufikelela okuyimfihlo kwiziphumo zabo zamva nje, kunye nolawulo lwamayeza, bazise umongikazi, okanye banxibelelane neenethiwekhi zentlalo.
Iziphumo ziyanelisa, nje ukuba kuqinisekisiwe ukuba isigulana asiyindawo encinci kumongikazi, sinolwazi lokuzibonela kwaye siyonwatyiswa ngakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » U-Apple ucinga ukuba i-Apple TV inendlela ende yokuya kwilizwe lezorhwebo
Inkqubo entsha yeMac Pro ibonakalisiwe kumnyhadala weNgqungquthela ye-FCPX kwaye uyathandana